Identity Archives — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား အထောက်အထား
ငါဘယ်သူလဲ? PT. 2: မွေးစား
ကျွန်တော်တို့ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေးနွေးမှုမှာအချို့အမြစ်နောက်ဆုံးအချိန်. ကျနော်တို့ရဲ့အထောက်အထားအရေးကြီးသောအဘယ်အရာကိုအကြောင်းပြောဆိုသော; အဓိကအားဖြင့်ကျနော်တို့နေသောမသိရပါဘူးလျှင်, ကျနော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ထင်နေပုံကိုသိမည်မဟုတ်. ပြီးတော့ကျနော်တို့လှလှပပဖန်ဆင်းနေဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုသော, ဒါပေမယ့်လည်းကျိုး. ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေကွဲ၏ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏မှကွဲကွာပြီးကယ်တင်ရှင်၏လိုအပ်ချက်အတွက်င်.
ဒီနံနက်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခံရအကြောင်းကိုလှပသောအမှန်တရားတွေထဲကတစ်ခုဆွေးနွေးရန်တာပေါ့, ကလေးမွေးစားသောဖြစ်ပါသည်. ဤအချက်မှာသော်လည်း, ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဆွေးနွေးမှုနည်းနည်းပြောင်းရွှေ့ရသည်. ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းနေကျနော်တို့နောက်ဆုံး night- အကြောင်းကိုပြောဆိုသောအားလုံးအရာတို့ကို, ဘုရားသခင်ကလူသိများ, ကျိုးပဲ့သော, နှင့်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်လူတိုင်း၏စစ်မှန်တဲ့ငတ်မွတ်သောသူတို့ကို-များမှာ. ယခုကြှနျုပျတို့အကွောငျးပွောတာပေါ့အရာတို့ကိုခရစ်တော်၌နေသောသူတို့သည်ဟုတ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းအရာဖြစ်ကြ၏. ကျနော်တို့အခုကခရစ်ယာန်တွေဖြစ်လာပြီးမှငါတို့ဝိသေသလက္ခဏာပြောင်းလဲဘယ်လိုအကြောင်းပြောနေတာင်
မကြာသေးမီကငါစတိဗ်ဂျော့ဘ်ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုဖတ်, Apple ကနောက်ကွယ်ကတည်ထောင်သူနှင့်အမြော်အမြင်, ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီ. သူကတစ်ဦးပါရမီကြောင့်ဒါဟာဖတ်ရှုဖို့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ခဲ့…
အဆိုပါ Bourne Identity ကိုစဉျးစားကွညျ့. ဤသူသည်တစ်လှေပေါ်တက်နှိုးနှင့်သူသည်အဘယ်သူသည်မသိရပါဘူး. သူကတစ်ဦးသဲလွန်စတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်မှဝင်. သူကတစ်ဦးရန်ပွဲအတွက်ရရှိသွားတဲ့သူကတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားင်သိ. သငျသညျကျပန်းသငျသညျလြှို့ဝှကျ Ninja ကိုကျွမ်းကျင်မှုခဲ့ထုတ်ကိုတွေ့လျှင်အရူးမဖွစျပါ့? ရုပ်ရှင်၏ကျန်သူသည်သူသူသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခရီးရဲ့. သူဟာပင်အကြောင်းကိုမသိခဲ့ပါအမှုအရာနိုင်စွမ်းရဲ့. ဒါပေမယ့်သူကမသိရပါဘူးဆိုရင်, သူများအဖြစ်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်…